नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजबाट उत्पादित विद्यार्थीहरु विश्वस्तरीय क्षमताका छन्-Setoghar
ई. सुधिर गुरागाई प्रबन्ध निर्देशक, कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एण्ड इन्जिनियरिङ (सिआइटीइ)
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा विविधिकरण हुँदै गएको छ । अहिले नेपालमा नयाँ विधाहरु समेत थपिँदै गएका छन् । विगतमा सिभिल, मेकानिकल, स्ट्रक्चरल लगायतका कोर्षहरु इन्जिनियरिङ कार्यक्रम भित्र समेटिँदै आएका भएपनि अहिले भने केमिकल इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ लगायतका थप कार्यक्रमहरु समेत इन्जिनियरिङ अन्तरगत थप हुँदै गएका छन् । जसले गर्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको दायरा थप विस्तार हुँदै गएको छ ।
नेपालले आफ्नै भू–उपग्रहको रुपमा बर्ड थ्रि स्याटेलाइट निर्माण गरेको छ । यस भू–उपग्रहका निर्माता मध्ये एक हरेराम श्रेष्ठ यसै सिआइटिइ कलेजका विद्यार्थी हुन् । अहिले नेपालका विद्यार्थीहरु विश्वका उच्च स्तरका कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो बर्ष भएको माइक्रोसफ्ट इमाजिन कपमा नेपाल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा विश्वका ५६ ओटा राष्ट्रहरूलाइ उछिन्दै अग्र स्थानमा पर्न सफल भएको छ । उक्त इमाजिन कपमा नेपालबाट ३ जना विद्यार्थीहरूहरूले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । त्यस मध्ये एक जना विद्यार्थी मिलन थापा यस सिआइटीइ कलेजका विद्यार्थी हुन् ।
नेपालका विद्यार्थीहरु क्षमतावान् छन् । उनीहरुमा राम्रो प्राविधिक ज्ञान छ । यद्यपि नेपालको बजार साँघुरो भएको कारण नेपाली विद्यार्थीहरुले नेपालमा राम्रो वातावरण पाउन सकेका भने छैनन् । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले आफ्नो क्षमतालाई राम्रो तवरले प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । अहिले विद्यार्थीहरुले नेपालमा नै बसेर विश्वका चर्चित कम्पनीहरुमा राम्रो सुविधामा काम गरिरहेका छन् । हाल ७५ जना भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू अमेरिकाको माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । यसरी हेर्ने हाे भने नेपालका थुप्रै विद्यार्थीहरू विश्वका चर्चित कम्पनीहरुमा काम गरिरहेका छन् ।
अध्ययन वा रोजगारीको लागि विदेशिनु बाध्यता
नेपालमा अहिले सम्म पनि सबै विषयमा माष्टर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशिनु बाध्यता बनेको छ । साथै नेपालमा क्षमता बमोजिमको जागिर पाउने वातावरण समेत नभएको कारण कतिपय विद्यार्थीहरु इन्जिनियरिङ अध्ययन पश्चात् रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था समेत छ । नेपालमा नै कामको राम्रो अवसर उपलब्ध हुने हो भने नेपाली विद्यार्थीहरु रहरले बाहिर जाँदैनन् ।
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा
नेपालमा सन् १९७६ तिर कोलम्बो प्लान अन्तरगत नेपाली विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियरिङ अध्ययनकाे लागि विदेशमा पठाउने प्रचलनकाे शुरुवात भएको हो । पछि नेपालमा नै पुल्चोक र थापाथली क्याम्पसहरु सञ्चालन गरिएपश्चात् नेपालमा नै यस किसिमका शैक्षिक कार्यक्रमहरु थप गरियो । यससँगै नेपालमा विश्वविद्यालय अन्तरगतको शैक्षिक कार्यक्रममा नै इन्जिनियरिङ शिक्षा समेटेर इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आइएको छ । अहिले सम्म आइपुग्दा पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका सबै विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । हाल सम्म नेपालमा करिब २३ फरक फरक विषयमा इन्जिनियरिङ शिक्षा सञ्चालन गरिएको छ । थप ३ विषयमा इन्जिनियरिङ शिक्षा सञ्चालनको लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । अहिले नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रयोगात्मक शिक्षा समेत भएको कारण नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्दो छ ।
नेपालको इन्जिनियरिङ कार्यक्रम विश्वस्तरीय छ
नेपालमा कुनै इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले तय गरेका मापदण्डलाई आधार मानेर १०० पूर्णाङ्क मध्ये न्यूनतम ७० अङ्क वा सो भन्दा माथि पुगेको अवस्थामा मात्र उक्त कलेजलाई इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अनुमति दिने गरिन्छ । यसरी नै इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट समेत नियमन हुने गर्दछ । साथै इन्जिनियरिङ अन्तरगत आइटि प्रोजेक्टमा आधारित कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमको अन्त्यमा न्यूनतम १ ओटा प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा एकातिर कलेज विभिन्न निकायबाट नियमन हुने र विशेष मापदण्ड पूरा गरेपश्चात् मात्र सञ्चालन गर्न पाईने व्यवस्था हुनु र अर्कोतिर विद्यार्थीले समेत विभिन्न प्रोजेक्टहरु गर्नुपर्ने भएको कारण नेपालकाे इन्जिनियरिङ शिक्षा गुणस्तरीय रहँदै आएको छ ।
अनुसन्धानको लागि लगानी वृद्धि गर्नु जरुरी छ
अहिले सम्म पनि इन्जिनियरिङ कार्यक्रम अन्तरगत अनुसन्धान पक्षलाई भने राम्रो तवरले समेट्न सकिएको छैन । इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरुलाई राज्यको पक्षबाट समेत विद्यार्थीहरुलाई तालिम, प्रयोगशाला, उपकरण, छात्रवृत्ति, पूर्वाधार तथा प्रविधि लगायतमा विशेष सहुलियत दिनु जरुरी रहन्छ । यद्यपि अहिले सम्म राज्यले यस्ता कुरामा कुनै चासो दिएको छैन । हुनतः नेपालका शैक्षिक संस्थाहरुले विभिन्न वर्कशप, इन्टरनेशनल एक्स्पो लगायतका विभिन्न गतिविधिहरु त सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसले विद्यार्थीको क्षमता विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको छ यद्यपि यस्ता क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने कार्यमा कलेजको सक्रियता मात्रै प्रयाप्त हुँदैन ।
साथै प्राविधिक कार्यक्रमहरु पूर्णतः व्यावहारिक हुने भएकोले औपचारिक रुपमा कलेजबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मात्र उनीहरुमा राम्रो क्षमता विकास हुन नसक्ने कुरालाई लक्षित गरेर सोही बमोजिम व्यावहारिक बनाउन विशेष व्यवस्था गर्नु जरुरी रहन्छ । यस कुरालाई समेत विचार गर्दै रिसर्च पक्षमा लगानी विस्तार गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
विविधिकरण हुँदै गएको नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा
हाम्रा आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्छ
हामीले कुनै नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने क्रममा हाम्रो आवश्यकतालाई विचार गरेर सोही बमोजिमका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु जरुरी रहन्छ । नेपालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सोहीबमोजिम हाम्रा गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नु जरुरी रहन्छ । साथै राज्यले कुनै विकास वा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा समेत निजी शैक्षिक संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत रहन्छ ।
नेपालमा इन्जिनियरिङ कार्यक्रमलाई राज्य पक्षबाट राम्रो तवरले नियमन हुँदै आएको छ । यद्यपि इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तरीयता अभिवृद्धिको लागि पनि जुन रुपमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा भने प्रयाप्त काम हुन नसकेको कुरालाई विचार गर्दै आगामी दिनमा सोही बमोजिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
कस्तो संस्था हो सिआइटीइ ?
नेपालको पहिलो आइटी कलेजको रुपमा विसिए कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सिआइटीइ कलेज स्थापना भएको हो । हाल बिआइटी, बिई कम्प्युटर, बिबिए लगायतका कार्यक्रमहरु यस संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा अहिले आइटीकाे क्षेत्रमा आफ्नाे छुट्टै पहिचान बनाउन यस कलेज सफल भएकाे छ । साथै यस कलेजका विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा आफ्नाे विशेष पहिचान बनाउन सफल भएका छन् ।